गृहपृष्ठ » अनौठो संसार » जब एक पुरुषले ६ जना युवतीलाई एकसाथ गर्भवती बनाएको खुलासा भयो
बिहिबार ११ मङ्सिर, २०७७
काठमाडौं । विश्वमा अनेक प्रकारका मानिसहरु रहेका छन् । यस्तै, नाइजेरियाली एक खेलाडी केटाले एक जना सेलिब्रिटीको विवाह समारोहमा ६ जना गर्भवती महिलाहरुलाई सँगै उपस्थित गराउँदै उनीहरु सबैको पेटमा आफ्नो बच्चा रहेको दावी गरेपछि विश्वभर हंगामा सुरु भएको छ ।
माइक एजे न्वाली न्वोगु नाम गरेका ती पुरुषले चम्किलो पिंक कलरको गाउन लगाएका ६ जना महिलाहरुसँग सामूहिक तस्बिर समेत खिचाएका छन् । उनले उक्त तस्बिर इन्स्टाग्राममा सार्वजनिक गरेका छन् । अभिनेता विलियम्स उचेम्बाको विवाह समारोहमा शनिबार यस्तो खुलासा गरेको समाचार विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुमा खबरहरु आइरहेका छन् ।
समाचार अनुसार नाइटक्लबका मालिक समेत रहेका ती पुरुषले आफ्नो नामको अगाडि आफैँ ‘सुन्दर’ उपनाम दिने गरेका छन् । अर्थात उनी आफूलाई ‘प्रिटी माइक’ भनेर चिनाउँछन् ।
उनले ती ६ महिलाको गर्भ आफ्नै कारण भएको र उनीहरुले जन्माउँदै गरेका सन्तान आफ्नै भएको दावी गरिरहँदा विवाह समारोहका अतिथिहरु हैरान भएका थिए । ती सबै ६ जना महिलाहरुलाई आमा बन्न लागेकोमा मुस्कुराउँदै बधाइ तथा शुभकामना दिँदै गरेको अवस्थामा देखिएको छ । साथै उनीहरुको पेटमा म्वाई समेत उनले दिएका छन् । News Source
भौतिक सम्बन्ध कायम गर्ने क्रममा २८ वर्षीय युवकको मृत्यु
नर्सले कोरोना संक्रमितसँग अस्पतालको शौचालयमा सबैथोक भयो भनेपछि… !
२० दिनसम्म मृत आमालाई घरमै राखेर जब बच्चाहरुले भगवानले आत्म फेरि फर्काउने आशा गरे !
अनौठो : अस्पतालबाटै अनुराधाको आँखा हरायो, आफन्त भन्छन् डाक्टरले निकाले, प्रहरी भन्छ मुसाले !
विमानस्थलमा एक्सरेले समेत नदेख्नेगरी ७६ लाख लाखको सुन ल्याउने दिमाग त लगाए तर बचेनन् !
तीन युवकलाई बुहारीको कोठामा आपत्तिजनक स्थितिमा गाउँलेहरूले समातेपछि बबाल
कमजोर मुटु भएकाले हेर्नपनि नसक्ने विश्वभरी भाइरल भएको यो मसाज !
आकाशको तारा दिन्छु भन्ने प्रेमको काल्पनिक सत्य : श्रीमतीलाई चन्द्रमाको जग्गा खरिद गरिदिए
आस्थाले अनेक गर्छ: मन्दिरको बन्ने खाल्डोमा ११ हजार लिटर दूध, दही र घीउ खन्याइयो
गुरुजीले प्रेममा खाए धोका, एक बर्षदेखिकी प्रेमिका केटा भएको खुल्यो, जान्नुहोस् रहस्य !
दिउँसोका लागि बच्चा जन्माउन रोक्ने औषधि र साधन ६ गुणा बढी किन्नुको कारण खुल्दा हैरान !